Yaya Toure oo shaaca ka qaaday in laacib haatan ka tirsan Man United uu yahay kii ugu adkaa ee uu ka hortagay waayihiisa ciyaareed – Gool FM
Yaya Toure oo shaaca ka qaaday in laacib haatan ka tirsan Man United uu yahay kii ugu adkaa ee uu ka hortagay waayihiisa ciyaareed
Haaruun November 19, 2019
(Manchester) 19 Nof 2019. Ciyaaryahankii hore ee Manchester City, Yaya Toure ayaa shaaca ka qaaday in laacib haatan ka tirsan Kooxda Manchester United uu yahay xiddigii ugu adkaa ee uu ka hortagay intii uu ku guda jiray waayihiisa ciyaareed.
Yaya Toure waxa uu daaha ka horay in laacibka khadka dhexe ee Manchester United, Nemanja Matic inuu yahay midkii ugu adkaa ee uu wajahay inuu uu ku guda jiray xirfaddiisa ciyaareed.
Toure ayaa siddeed xilli ciyaareed ku qaatay garoonka Etihad, waxaana uu ku guuleystay saddex horyaalka Premier League iyo hal FA Cup, isagoo iska dhigay mid ka mid ah xiddigaha khadka dhexe ee ugu fiican Premier League.
Xiddiga reer Ivorian kaasoo guud ahaan 316 kulan u saftay Manchester City ayaa kooxdaas isaga tagay sanadkii 2018-kii, waxaana uu haatan u ciyaaraa kooxda Shiinaha ka dhisan ee Qingdao Huanghai.
Isagoo ka jawaabayay ciyaaryahankii ugu adkaa ee uu wajaho intii uu ku guda jiray xirfaddiisa ciyaareed, Toure ayaa u sheegay Jariiradda The Times: “Nemanja Matic waxa uu ahaa mid dhib badan, isagu ma deg-deg badna, laakiin waa nin xoog badan oo xariif ah.
“Dhammaan inta kale ee ka soo horjeedda, maxaa yeelay waxaan had iyo jeer u fiirsanayay si taxaddar leh ciyaarta ka hor, waxaana helayaa daciifnimadooda.”
Hal ciyaar oo ay Matic saameyntiisa guud ku lahayd khadka dhexe ayaa soo baxday markii Yaya Toure oo ka tirsanaa Man City ay guuldarro 1-0 ka soo gaartay kooxda Chelsea oo uu maamulayey Macallin Jose Mourinho taasoo uu ku jiray xiddiga xulka qaranka Serbia, waxaana qaab ciyaareedkiisii fiicnaa ee Matic ay ka caawisay in Citizens ay la kulmaan guuldarradii ugu horreysay ee gurigooda ku soo gaarta xilli ciyaareedkii 2013-14.
Qisada ciyaaryahan aan hadda ka hor wax badan ka aqoon kubadda Koleyga, Aabihiis oo doonayey inuu Baaderi noqdo xilli maantana uu ku qiimeysan yahay $130 milyan